dimanche, 16 juin 2019 20:16
Fandraharahana ny fonja: Milamin-dratsy
Mankalaza ny faha-60 taonany izao ny fandraharahana ny Fonja eto Madagasikara, nosantarina tamin’ny vavaka iraisam-pinoana teny amin'ny EKAR Faravohitra Antananarivo tamin’ny 02 aprily 2019 izany. Foibem-pitondrana ankapobeny eo anivon’ny ministeran’ny Fitsarana ny fandraharahana ny Fonja.
Niova im-betsaka ny minisitry ny Fitsarana sy ny Praiminisitra ary ny Filohan’ny Repoblika tao anatin’izay 60 taona izay, fa tsy nanaraka an’izay tsioka izay ny an’ny fandraharahana ny Fonja fa toa « milamin-dratsy ! », izay no teny mahafintina ny zava-misy.
dimanche, 16 juin 2019 20:06
Soudan: Hotsaraina noho ny raharaha kolikoly ny filoha teo aloha Omar el-Béchir
Hiakatra fitsarana ao Khartoum renivohitr’i Soudan amin’ny herinandro ho avy io ny filoha teo aloha, niongana, Omar el-Béchir, araka ny nambaran’ny lehiben’ny fampanoavana ao an-toerana, omaly.
41 be izao ny fiampangana ani’ Omar el-Béchir, ary mampitombo ny ahiahy kolikoly nataony ny nahitana vola 113 tapitrisa dolara tao an-tranony tamin’ny fisavana ny tranony, taorian’ny nionganany teo amin’ny fitondrana tamin’ny aprily 2019 lasa teo.
Sambava: Tovolahy iray mpianatra, kilasy “3ème”, maty notifirin’ny jiolahy
Halatra nitranga tao amin'ny Fokontany Ambatofitatra eto amin’ny Kaominina ambonivohitr’i Sambava no niafara tamin’ity vono olona ity.
Tovolahy antsoina hoe: Lovasoa, 20 taona, avy any amin’ny Kaominina Andrahanjo fa mipetra-drery, mandrato fianarana eto Sambava. Nisy andian-jiolahy nangalatra ny « panneau solaire » miaraka amin'ny « batterie » tamin’ny trano nitoerany ny zoma 14 jona tokony ho tamin'ny 11ora alina.
Taitra tamin'ny toromasony i Lovasoa ary nentin’ny hafanam-po ka nanenjika ny mpangalatra. Tifitra anefa no nasetrin’ireo jiolahy, ka nahalavo azy. Nifamonjena nentina teny amin'ny hopitalibe Besopaka izy, ny sasany niantso mpitandro ny filaminana. Tsy tana intsony ny ainy nony maraina ny andro.
Ny sabotsy maraina ihany dia efa tonga ny fianakaviana naka ny razana teny amin'ny hopitaly.
dimanche, 16 juin 2019 19:49
Distrikan'i Maroantsetra: Hisokatra amin'ny 15 Jolay ny taom-piotazana lavanila
Fivoriana notarihin’ny lehiben'ny Faritra Analanjirofo omaly 15 jona 2019 izay nahitana ny fandraisana anjaran’ny mpandraharaha sy mpamboly lavanila no nanapahana an’io datin’ny taom-piotazana lavanila 2019 io.
Ho hentitra ny fanaraha-maso, hisorohana ny gaboraraka, ary hanatsarana ity lalampihariana lavanila aty Analanjirofo ity.
dimanche, 16 juin 2019 19:48
Journée Mondiale de l'enfant Africain.